हिट फिल्म दिएकी बर्षा जुन पायो त्यही फिल्म नखेल्ने !! – ताजा समाचार
हिट फिल्म दिएकी बर्षा जुन पायो त्यही फिल्म नखेल्ने !!
धन्न, चलेका अभिनेत्रीहरुका लागि फिल्म नभए पनि म्युजिक भिडियो भन्ने चिज छ। त्यो पनि नभए टिकटक छँदैछ। प्रशंसकहरुले कहाँ फेला पार्ने र के हेर्ने भन्ने चिन्ता लिइरहनु पर्दैन।
बिहेपछि वर्षा राउतका हातमा नयाँ फिल्म छैनन्। बिहेअघिका ‘दाल भात तरकारी’ र ‘जात्रैजात्रा’ले ५१ दिन मनाइसके। हिट फिल्मकी हिरोइनमा उनी दरिइसकिन्। यस्तोमा जस्तो पायो त्यस्तै फिल्म खेल्ने कुरा पनि भएन। प्रस्ताव राख्नेले पनि झट्टै राख्न नसकेकाले पनि हुनसक्छ, उनी यतिबेला फिल्मविहीन छिन् रे !
त्यसो त फिल्म छानेर गर्ने भन्ने हल्ला फिँजिएपछि आफूकहाँ कम प्रस्ताव आएको हल्ला पनि चलिरहेकै छ। हुन पनि स्क्रिप्ट नपढी के फिल्म गर्नु ? यत्तिको हिट भइसकेपछि यति अडान त राख्नै प-यो नि !
अष्ट्रेलियामा खुलेकि वर्षा (हेर्नुहोस् तस्बिरहरु)